Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Turkiga oo Ka Doodaya Isbadal Dastuurka Lagu Sameeyo.
Baarlamaanka Turkiga oo Ka Doodaya Isbadal Dastuurka Lagu Sameeyo.
Sida ay qoreen Wakaaladaha Wararka ee dalka Turkigu Golaha Baarlamaanka ayaa billaabay dood ku saabsan qorshe lagu doonayo in isbadal lagu sameeyo dastuurka dalka Turkiga si awoodo dheeraad ah loo siiyo madaxwaynaha Jamhuuriyada Turkiga.
Madaxwaynaha xilka haya, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in awood heer sare ah ay Turkiga la simi doonto dalalka Faransiiska iyo Maraykanka. Isbadalkan cusub ee Baarlamaanku uu ka doodayo ayaa awood buuxda u ogolaan doonta madaxwaynaha dalka hadii la ansixiyo hindisan cusub.
Dadka isbadalkan kasoo hor-jeeda ayaa waxay sheegayaan in arrintaas ay lamid tahay awood-muquunsi dalka u horseedi doonta kali talisnimo. Waxay cuskanayaa talaabooyinkii ay dawladu qaaday afgambigii dhicisoobay ee sanadkii hore 2016 kii, kaasoo dad badan oo looga shakiyay inay ku lug lahaayeen isku-daygii afgambiga jeelasha loo taxaabay.
Madaxwayne Erdogan ayaa haddaba dalka ku maamulaya awoodo dheeri ah oo waafaqsan xukunka degdegga ah ee la soo rogay bishii todobaad ee sanadkii hore, ka dib afgambigiii dhicisoobay. Xisbiga talada haya ee AK waxay u baahan yihiin taageerada xisbiga mucaaradka ah ee MHP si loo meelmariyo ka hor inta aan afti dadwayne loo qaadin isbadalka cusub.